Mmiri na maapụ. com - Geofumadas
Machị, 2012 ArcGIS-ESRI, Cartografia, Geospatial - GIS
Esri Spain akwalitewo ihe na-adọrọ mmasị maka Ụbọchị Mmiri nke Ụwa, site n'igosi weebụsaịtị aguaymapas.com na akwụkwọ akụkọ na anyị dịtụtụ trastocamos n'isiokwu a.
"N'okpuru Ụbọchị Mmiri Ụwa na Esri Spain, anyị chọrọ igosi otú oké ọkọchị nke ọnwa ndị a si emetụta mmiri anyị. Anyị kwenyere na ịhụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi na mmalite ya, yana ụkọ nri, na map, nwere ike inyere ụmụ amaala aka ịmara ọnọdụ anyị bi na ya ma mee usoro kwesịrị ekwesị maka njikwa nke akụ a "
Diego Hidalgo, maka maka gburugburu ebe obibi nke Esri Spain.
Nchọpụta mara mma nke nwere ihe metụtara anyị niile. Na ụkpụrụ nduzi 2012: Agụụ na-agụ ụwa n'ihi na agụụ na-agụ anyị, mgbe oyi oyi nke ikpeazụ 70 afọ, aguaymapas.com na-enye ọtụtụ map ndị e mere iji gosipụta ọnọdụ dị ugbu a na Spain, na ebumnuche nke inyere anyị aka ịmara eziokwu na mkpa ijikwa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ebe e si nweta nkọwa map nke map mmiri, aguaymapas.com, sitere na ọha na eze nke State Agency of Meteorology, Bulletin Hydrological bipụtara nke Ministry nke Agriculture, Food na Environment na Embalses.net.
Map ahụ na-enye ọtụtụ isiokwu dị iche iche: Mmiri na-edozi; Mmiri mmiri ozuzo; Ọnụ Mmiri; Nyocha nke iwepụ na afọ 70 ikpeazụ;Na-agbanye ndị Spain y Mmiri mmiri.
Na map anyị nwere ike ịhụ Mmiri na-edozi, nke na-enyocha ọnọdụ dị ugbu a nke Spanish reservoirs.
Maapụ ahụ gụnyere nhazi ọkwa nke ọdọ mmiri dabere na oke mmiri ha na-echekwa ugbu a, iji tụnyere ọnọdụ dị ugbu a gbasara 2011 na nkezi enwetara na afọ ndị na-adịbeghị anya, yana ozi gbasara ikike nchekwa nke ọdọ mmiri.
N'ime data anyị nwere ike ịnweta na eserese ahụ, anyị nwere ike ịchọpụta na na mpaghara iru mmiri dịka Galicia, Ugwu Cantabrian ma ọ bụ Western Pyrenees, mmiri dị na ọkwa dị ala. Mgbe ha nọ na ọdọ mmiri nke Extremadura ma ọ bụ na ndagwurugwu Guadalquivir, ọdọ mmiri ndị ahụ dị na 70% nke ikike ha.
E wepụtara data ahụ site na Akụkọ Mmiri nke Mmiri nke Ụlọ Ọrụ Agriculture, Food na Environment.
Nkọwa nke Mmiri Oké Osimiri na afọ iri na abụọ gara aga
Map na-agụnye mmalite nke mmiri ozuzo na-ezokarị n'oge ọnwa February n'etiti afọ 2000 na 2012 na data si n'aka State Meteorological Agency.
Na map anyị nwere ike ịchọta ihe ndị na-esonụ: ọdịda n'oge ọnwa nke February nke 2012 bụ nke kachasị n'ime afọ ikpeazụ. N'ebe a na-ekpo ọkụ dịka Galicia ma ọ bụ n'ugwu dị elu ebe ebe snow snow (Pyrenees) na-emekarị n'oge a, ọdịda enweghi ihe dị adị.
Map ahụ na-agụnye onyinyo raster nke na-egosi na agbazere mmiri ozuzo na Spain na mmalite nke ndụ ya.
Evolution of Total Year Precipitation since 1921
Na map anyị nwere ike ịhụ nyocha nke mmiri ozuzo na-ezokarị na afọ mbụ nke ọ bụla afọ iri sitere na 1921, na data nwetara site na State Meteorological Agency.
Ọ bụ ezie na afọ mmiri nyochachara mmiri ozuzo nwere usoro ihe omume cyclical ma ọ bụ karịa, a pụrụ ịhụ ya na mpaghara nke atọ nke ebe ndịda nke Iberian na-aghọwanye ihe na-emekarị ka afọ ole na ole.
Map ahụ na-agụnye onyinyo raster nke na-enyocha ikesa mmiri na gburugburu ebe obibi Spanish site na agba na-acha nwayọọ nwayọọ na teepu mmepụta nke na-enye ohere iji chọpụta ihe ndekọ dị iche iche na 10 nyochaa oge milestones.
Nkọwa nke iwe na Spain na 70 ikpeazụ
Na map anyị nwere ike ịhụ nyocha nke oke mmiri oyi na Spain n'etiti 1931 na 2011. Nke a na-enye ohere ịnweta data na usoro nke ịbelata mmiri na ala na mmiri n'ime ikuku (nkwụsị). E nwetawo data site n'aka Ụlọ Ọrụ Meteoro Ọchịchị.
Ihe data nwetara gosiri na, ma e wezụga nke Autonomous Community of Galicia, a na-ebuwanye ebubo ebubo.
O na-achikota ot 'u ebe ogbagwoju ohia ndi ozo na-adi elu n'ime afo iri gara aga, nke negosi usoro ngbadoro na Peninsula.
Nkọwa na-adabere na mmekọrịta dị n'etiti ọdịda na okpomọkụ. Usoro a na - agbakọọ nke a bụ Nkọwapụta ikuku nke Knoche (Ik): Ik = n * P / (100 * (T + 10)).
Ndị mmadụ meriri na Spain
Ihe ngosi a na-egosi na obodo ụfọdụ nke Spen nke mmiri na-agbapụta na-adabere na iwu nke ala ma ọ bụ mmiri. Enwetara data sitere na Embalses.net.
Maka map a, e jirila ArcGIS Explorer Online mee ihe ngosi, a na-eme ngwa ngwa mmekọrịta Microsoft Silverlight.
O yiri ka anyị bụ mgbalị na-akpali mmasị nke nhụwa ma ihe a ga-eme na teknụzụ ndị nwere ikike na-agbakwụnye na ịmara ihe gbasara mmasị zuru ụwa ọnụ.
Previous Post«Previous Mbupụ ndepụta nke nhazi ala ala na Google Earth, site na Excel, na onyogho na ederede bara ụba
Next Post Na azụ nke aka gịNext »